Koobka Qarammada Afrika 2019 oo caawa daaha laga rogay & Xulka Masar oo guul ku furtay… + SAWIRRO – Gool FM
Koobka Qarammada Afrika 2019 oo caawa daaha laga rogay & Xulka Masar oo guul ku furtay… + SAWIRRO
Haaruun June 21, 2019
(Qahira) 22 Juunyo 2019. Tartankan koobka qarammada qaaradda Afrika ee 2019 ayaa caawa si rasmi ah uga furmay Magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar, iyadoo munaasbad qurux badan oo lagu daah rogay halkaasi lagu qabtay ka hor inta aysan wada ciyaarin xulalka Egypt iyo Zimbabwe.
Xulka Qaranka Masar ayaa guul 1-0 oo ay ka gaareen dhiggooda Zimbabwe ku daah furtay tartanka sanadkan, kuwaasoo ku wada jira Guruubka A.
Xulka Marti-gelinaya tartankan koobka qarammada qaaradda Afrika 2019 ee Masar ama Egypt ayaa goolka la horreeyay waxaana ay la yimaadeen goolka furintaanka ciyaarta iyo weliba furitaanka tartanka oo dhan dhammaadkii qeybtii hore ee ciyaarta.
Egypt waxaa goolka furintaan ciyaarta u dhaliyey 41’daqiiqo, Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan oo loo garan ogyahay Trézéguet, kaasoo noqday ciyaaryahanka goolkiisii ugu horreeyey sanadkan ka dhaliyey koobka qarammada Afrika 2019, waxaana goolkaas caawiye ka ahaa Ayman Ashraf.
Trézéguet ayaa si wacan kubadda uga leexsaday difaacyada Zimbabwe kubadda shabaqa u diray sidaas ayaana lagu kala nastay xulka Masar oo kulankan ku hoggaaminayey 1-0.
Qeybtii labaad ee ciyaarta markii dib la isugu soo laabtay labada xul ayaa sameeyey fursado goolal loo filan karay, laakiin ma dhicin inay shabaqa soo taabtaan kulanka ayaana ku soo dhammaaday 1-0 oo ay guusha ku heleen xulka Masaarida.
Xulka Masar ayaa gaaray guushii ugu horreysay tartanka sanadkan, halka Zimbabwe ay la kulmeen guushii ugu horreysay tartanka.
Kooxda Manchester United oo 48-da saacadood ee soo socota dhammaystiraysa saxiixeeda labaad ee xagaagan
“Foorida iyo oorida taageerayaasha waxay iga dhigeysaa mid xoogan” - Cristiano Ronaldo